C/weli Gaas oo Qaramada Miboobay ugu baaqay inay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo Qaramada Miboobay ugu baaqay inay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliya
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa Qaramada Midoobay ku eedeeyay inay faragelin weyn ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya, isagoona ugu baaqay inay faraha kala baxdo arrimahaas.
Madaxweyne C/weli Gaas oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu xusaayay markii la aas-aasay Puntland ayaa ka hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya, isagoona tilmaamay in QM ay Soomaaliya ku hayso faragelin xoogan.
Wuxuu C/weli Gaas sheegay in dalka Soomaaliya ay haatan ka jirto dowlad federaal ah oo aan KMG ahayn, balse ay faragalin ku hayaan wakiilkii hore ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay iyo wakiilka haatan xilkaasi la wareegay Michael Keating.
“Qaramada Midboobay waxay Soomaaliya ku heysaa faragelin weyn, Soomaaliya xilligaan way ka baxday KMG-kii, waxaana dalka ka talisa dowlad federaal ah, balse waxaa haatan ii muuqata inay jirto faragalinta ay Qaramada Miboobay ku hayso arrimaha Soomaaliya” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne C/weli Gaas.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa kusoo beegmaya xilli dhowr jeer hore ay Qaramada Midoobay sheegtay in aysan aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashada sanadkaan ka dhici doonta dalka Soomaaliya.